Karayolları Genel Müdürlüğünün Yeni Araçları Hizmete Alındı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia03 AfyonkarahisarAgaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn Oo Soo Bandhigay Gawaarida Cusub
05 / 12 / 2019 03 Afyonkarahisar, 06 Ankara, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
Gawaarida cusub ee agaasinka guud ee jidadka waa la galiyay
Wasiirka Turhan, Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn (KGM) sanadkaan gudiga loo xilsaaray ka hortagga barafka iyo mashiinada dayactirka wadooyinka, ayaa xaflada ka sheegay.
goobta gaadiidka Turkey ee "ha giraangiraha jeedin, hab aad ku socdaan" iska garashada ka dambeeya shaqada socota dhismaha waddada ku muujinayaa Turhan, hadda raacaan heerarka caalamiga ah, raaxo iyo waddooyin baabuur wadista, ayuu yidhi dhismeedka in ay bixiyaan ammaanka ilaa xadka ugu badan.
Turhan wuxuu sidoo kale cadeeyay in xaalad la mid ah ay ansax u tahay shaqooyinka dayactirka wadada, “Waxaan ku maalgelinay 17 bilyan ginni wadooyinka waaween sanadkii ugu dambeeyay ee 469. Waxaan kor u qaadnay dhererka waddo-kala-goynta ah ee ka sarreysa dabaqa 4 illaa xNUMX kun oo 27 kiiloomitir ah. Waxaan magaalooyinkayaga oo dhan ugu xiriirnay siyaabo kala go'an. Waxaan kor u qaadnay dhererka wadada oo leh BSK laga bilaabo 123 kun 8 kiiloomitir ilaa xNUMX kun oo 650 kiiloomitir. Buuraleyda, dooxooyinka, dariiqyada, badaha, buundooyinka iyo burooyinku way soo gudbeen. ”
Turhan, kordhinta amniga taraafikada iyo raaxada safarka sababta oo ah yareynta shilalka shilalka, iyada oo la xuso in beeraha, ganacsiga, dalxiiska iyo horumarinta kaabayaasha gaadiidka looga baahan yahay horumarka horumarka weyn ee lagu gaarey horumarka is dhexgalka la sheegay.
Turhan wuxuu xusey in kharashaadka gawaarida howl galada sidoo kale loo badbaadiyey ilaa xad weyn, isagoo intaa ku daray in Thanks to wadooyinka oo kaliya la kala qaybiyey, in ay bixiyaan in kabadan 18 bilyan Lira dhaqaalaha qaranka sanad walbo sidii shaqo iyo keydin shidaal.
Yüzde 66 boqolkiiba ee mashiinnada iyo qalabka dhowaan la soo iibsaday waa kuwo gudaha ah "
Turhan wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay in wadooyinka la istcimaalo sidoo kalena la furo wadooyinka. “Xaaladaha juqraafi ahaaneed iyo cimilada dalkeenna waa la yaqaanaa. Maalin kasta, malaayiin gaadiid ah oo dalka oo dhan ayaa socda. Dhinac, inta aan horumarineyno kaabayaashayaga wadooyinka waaweyn, dhinaca kale, 365 maalin baraf, jiilaal iyadoo aan la dhihin gawaarida ayaa si nabdoon u kaxeynaya.
Turhan, wadooyinka tuulada waxay xirnaayeen bilooyin sababtoo ah baraf, sugaya maalmo dhinaca baska wadada, safafka gawaarida gawaarida ayaa lagu aasay taariikhda, isagoo sharraxaya, wuxuu yiri:
Wareegtadan, waxaan ku darnaa mashiinada furi doona jidadkeena oo jidadkeena furi doona anigoon oranin baraf, jiilaal iyo duufaano, qaab dhismeedka Agaasinka Guud ee Wadooyinka. Waxaan ku dari karnaa mashiino iyo qalab si joogto ah loogu baahan yahay alaabada Agaasinka Guud ee dagaalka barafka iyo dayactirka wadada. Mashiinka 2019 148 iyo 258'i 133'i milyan oo doolar oo ka mid ah xaddiga qalabka, oo ay ku jiraan wadarta guud ee mashiinka 391 iyo qalabka aan u soo qaadnay jidad badan. Kuwaas waxaa ka mid ah xirmooyinka barafka ee 97 iyo kuwa wax lagu buufiyo, gawaarida dhagaxa ee 10, gawaarida waaweyn ee 18, gawaarida 9, boorarka 3, gawaarida jiidayaasha 9, kuwaas oo muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah barafka. Aad ayey muhiim u tahay in 66 ee mashiinnada iyo aaladaha la soo iibsaday ay yihiin soo-saarka gudaha. Qiimaha kuwan waa 98 milyan oo rodol. Iyada oo la soo iibsaday kuwii ugu dambeeyay, Agaasinkayaga Guud wuxuu awood u yeeshay inuu ku adeego 5 kun oo ah Mashiinnada iyo qalabka, oo ay ku jiraan 12 kun oo mashiinno dhaqaajiya. "
Gawaarida waxaa loo diri doonaa meelaha loo baahan yahay ”
Qalabka iyo qalabka la soo dejiyo, gaar ahaan wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda bilaha jiilaalka, gaar ahaan magaalooyinka Turhan, isagoo uga mahadcelinaya baabuurta la isweydiinayo, gaar ahaan magaalooyinka iyo gobollada halkaasoo xaaladaha jiilaalka ay aad u daran yihiin, waddooyinka dalka oo dhan waa la furi doonaa, ayuu yiri.
Turhan wuxuu rajeeyay in gawaarida cusub ee loo diro maadaama lagu xoojinayo meelaha loo baahan yahay ay ka faa'iideysan doonaan, wuxuuna u rajeeyay shaqaalaha inay ku shaqeeyaan xaaladaha jiilaalka adag.
Khudbadiisa kadib, Turhan wuxuu baaray mishiinada iyo qalabka.
TCDD 5 Agaasinka Gaadiidka Gobolku wuxuu u baahan yahay inuu iibsado 1 (One) Forklift
Ogeysiiska Qandaraaska: Gawaarida-tareenka-gawaarida 'mootooyinka iyo taraafikada wadooyinka…
Ku dhawaaqida qandaraaska: Kapıkule Aaga shaqada ee agaasinka saadka iyo nadiifinta gaariga…
TCDD 1. Maalgashiga Agaasinka Gobolku wuxuu ku dhawaaqay Edirne
Ogeysiinta Qandaraaska: Dhismaha maamulka ee Maareynta Maareynta Maareynta HaydarPaşa iyo nawaaxigeeda…
Soo bandhigida hindisada: Isbedelka gudaha ee Agaasinka Saadka ee Ankara
Dhex galka dhererka wadada
Gawaarida Cusub ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn